Umpheki waseFrance, i-confectioner kanye ne-distiller, uNicolas-Francois Appert, uthathwa njengobaba we-canning ngokubonga kwakhe kokuqalwa kokulondolozwa kokudla okungekho ku-airtight. U-Appert wasungula ukumiswa komdwebo ngenxa yomklomelo wama-francs ayi-12 000 owanikezwa uNapoleon Bonaparte kunoma ngubani ongaqhamuka nezindlela ezisebenzayo zokulondolozela umkhosi wakhe ukudla ngesikhathi eside.
Lapho kungekho khona isayensi yokusekela ngokulondolozwa kokudla kanye ne-bacteriology, kwathatha iminyaka eyishumi nane ukuthola isisombululo. Iningi lezivivinyo zakhe bezisuselwa ekubulaweni kwezibiliboco ngokubilisa nokubeka lokhu kudla ezitsheni zomoya.
U-Appert, owayengafundanga ngokusemthethweni, wavula ifektri yokuqala yokuqala yamalambu eMassy ngonyaka ka-1804 futhi wahlabana ngomklomelo kaBonaparte ngonyaka we-1810, ngemuva kokushicilela ukutholakala kwakhe kuLe Livre de tous les Menages, ou l'Art de Conserver Pendant Plesieurs Annees Toutes les Subsians Animales et Imifino (Ubuciko Bokulondolozela Zonke Izinhlobo Zezilwane Nezinto Ezihlaza Iminyaka Eminingana).
Emuva ngaleso sikhathi kwathatha cishe amahora amahlanu ukwenza inzalo ukhiqize, owawubekwa emabhodleleni engilazi, umiswe ngokukhululekile ngamakhokho, futhi ucwiliswe emanzini ashisayo. Amabhodlela abekwa uphawu ngokuqinile ngamakhakhasi ne-wax.
U-Appert akaze aqonde ngokuphelele ukuthi kungani inqubo yasiza ukuvimbela ukubola, isizathu savela kuphela isigamu seminyaka eyikhulu kamuva, ngemuva kokuba uLouis Pasteur etholakele ubudlelwane phakathi kwamagciwane kanye nokudla okuchithekile.
Kuqala, kwakusetshenziswa iziqukathi zengilazi kuphela ezazigcinwa ukugcinwa, kepha iziqukathi zengilazi zashintshwa ngokushesha ngeziqukathi zensimbi lapho umthengisi waseNgilandi, uPeter Durand ngo-1810, amathini enamalungelo obunikazi enamalungelo obunikazi. Namuhla, ukuwafaka uyakwazi ukulondolozela ukudla isikhathi esingaphezu kweminyaka emithathu, kunciphisa ukumosheka futhi kuvumela abathengi ukuthi bajabulele izithelo abazithandayo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Imakethe Yamanyeya Yamazwe Omhlaba Yokugabha
Ukusetshenziswa kokudla okuhleliwe kulindeleke ukuthi kukhuphuke ngesilinganiso esilinganiselwe sama-3.8% ngonyaka ukufinyelela inani lama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-118 ngonyaka ka-2023, njengoba kushiwo yiMakethe Yokudla Emhlabeni Wonke - Ukukhula, Amathrendi kanye ne-Forecast (2018 - 2023). Imakethe iphethwe ngabasebenza ngokumbalwa, abathengisa umkhiqizo wabo emhlabeni wonke.
Amathrendi wakamuva wokudla okwenziwe ngamakhekhe awezinkampani ukuthi zizame ukufaka izinto futhi zihamba nge-BPA mahhala. I-BPA imele iBisphenol A, ikhemikhali elenzelwe ukuxhunyaniswa nezinkinga zezempilo kanye nezinkinga zokuziphatha ezinganeni.
Ngaphandle kwalokhu, abaprosesa bazama izindlela ezintsha zokubhekana nokukhathazeka ngokuqukethwe koshukela kwezithelo ezi-canning.